"Markii ay dileen Aabahey iyo Seygayga ayaan dhiigooda baneystay"
Wiilo Cabdi Cali Faarax, hooyadda caruur, kana tirsan Ciidamadda Soomaaliya | Xuquuqda Sawirka: SNTV via GO
Maryan Siid Cali Shariif, askariyad ka tirsan ciidamada Soomaaliya | Xuquuqda Sawirka: SNTV via GO
MUQDISHO, Soomaaliya – Markii ay dagaalameyaasha AlShabaab "si silac ah" u dileen labadeedii garab – Aabaheed iyo Seygeeda – waxay qaadatay go’aan weyn oo wax badan ka bedelay nolosheeda.
Wiilo Cabdi Cali Faarax, hooyadda caruur, kana tirsan Ciidamadda Soomaaliya, gaar ahaan ururka Danab, riyaheedu marnaba ma aysan ahayn in ay askariyad noqoto, balse daruuf ayaa ku jiiday.
Xili ay dhalaan ahayd, 12-sano kahor, Aabaheed Cabdi, waxaa gowracday kooxda gacansaarka la leh shabakada Al-Qaacida ka gedaal markii uu ku gacan-sayray bixinta lacago baad ah oo lagu soo rogay.
"Aabahey wuxuu u dhintay si silac ah isaga oo beer leh oo beertiisa ay ku taalo Guul-weyn. AlShabaab ayaa bireeyay markii uu diiday canshuur," ayay tiri iyadoo kasoo muuqatay Telefishinka Qaranka.
Ninkeed, abaalduulihii Ururka 4aad ciidamadda xooga, ayaa isana ku naf-waayey weerar gaadmo ah oo ay Al-Shabaab la beegsatay kolanyo uu la socday, isaga oo kamid noqday tobanaan dhintay.
"Ilmaheyga haatan agoon waaye, aabahood iyagaa [AlShabaab] dilay, wuxuu ka tirsanaa ururka 4aad ee Danab oo uu ahaa abaan-duulahood," ayay raacisay hadalkeeda, iyadda oo qiireysan.
Inta ay ka tirsan tahay Xoogaga Difaaca Qaranka waxaa hal-jeer loogu qaadey Uganda tababar. Wixii ka dambeeyay gudaha waddanka ayey ku sug-neyd, una hurtay dhigeeda difaaca wadanka.
"[Kadib dilka aabaheed iyo seygeeda] Aniga markaasi ayaan baneystay dhiigooda, awalba aniga keyga way baneysteenee," ayay raacisay, iyadda oo wacad ku martay in ay wadeyso gulufka.
Askariyadan ayaa haatan ku sugan jiida hore gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ay kaga qeyb-qaadaneyso howlgalladda socda ee lagu xoreeyay degaano ay kamid tahay tuuladda Awdheegle.
Sanadihii u dambeeyay gabdhaha iyo hooyooyinka kusoo biiraya ciidamadda Soomaaliya ayaa isa soo taraya, waliba kuwa qeybta ka kuwa qaada dagaalka dhulka ee fool ka foolka ah.
Maryan Siid Cali Shariif, oo hablahaasi kamid ah, iyadda oo bogaadineysa nah-hurnimadda hooyooyinka sida Wiilo, ayaa waxay hoosta ka xariiqday in difaaca dalka ay cid kasta mas'uuliyad ka saaran tahay.
"AlShabaab waa dad gaboolka uu sii dhacayo. Aniga haatan waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo u soo istaagtay difaaca dalkeeda, diinteeda iyo dadkeeda, waxay mas’uuliyad ka saaran tahay cid kasta," ayay xustay.
Sanadkii 2013-kii, gaar ahaan bishii Janaayo ayey Maryan ku biirtay ciidamadda Soomaaliya, waxayna tan iyo xiligaasi qayb ka ahayd iska hor-imaad iyo qabshada degaano badan oo Al-Shabaab laga saarey.
Sarkaalkan dhalinyaradda ah, kaasi oo uu tababaray Mareykanka, ayaa lagu tilmaamay "howlkar geedis ah".
Ciidanka Soomaaliya oo dad kasoo watay tuulo ay maamusho Al-Shabaab
Soomaliya 11.05.2019. 05:36
Askar ay doon kula qalibmatay Soomaaliya oo lasoo badbaadiyey
Soomaliya 23.10.2019. 07:37
AlShabaab oo weerar ku qaadey garoonka Balidoogle
Soomaliya 30.09.2019. 11:42
"Waan ogaa in uu Shabaab yahay; ismana lahayn Abtigaa ayaa ku dilayo"
Soomaliya 20.09.2019. 16:51